အခြေခံအဆောက်အအုံ | Shacha TechnoForge Pvt ။ Ltd.
အနီးကပ်သေဆုံးခြင်း [2 ကီလိုဂရမ်။ 50 ကီလိုဂရမ်ရန်]
ဤနေရာတွင်အပူကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကိုရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုရှိသောသေဆုံး. လိုချင်သောဖိအားကိုလျှောက်လွှာတင်ခြင်းအားဖြင့်ကုန်ကြမ်းသည်သေလုယန်သောပုံစံကိုရရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သေလွန်သူ၏အောက်ပိုင်းကိုပုံသေသတ်မှတ်ထားသည်။ အနီးကပ်သေဆုံးခြင်းအတုနည်းလမ်းသည်သတ္တုများနှင့်၎င်းတို့၏သတ္တုစပ်များအတွက်သင့်တော်သည်.
၎င်းသည်အနီးကပ် -die တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။. Shacha Technoforge နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုလည်ပတ်ပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောပညာရှင်များသည်ကြာရှည်စွာကာလကြာရှည်စွာအချိန်နှင့် ပတ်သက်. တသမတ်တည်းအရည်အသွေးရလဒ်များရရှိရန်အတွက်အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောပညာရှင်များရှိသည်.
1 တန်ခါးပတ် Drop Hammer (ပိတ်ပစ်သေဆုံး) သည်5ကီလိုဂရမ်အထိလုပ်ပိုင်ခွင့်.
2.5 တန်ခါးပတ်လ် (ပိတ်ပစ်) Hammer (ပိတ်ပစ်) အရှည် 12 ကီလိုဂရမ်အထိ.
3.5 တန်ခါးပတ်လ် (ပိတ်ပစ်သေဆုံး) သည်ကီလိုဂရမ် 50 အထိရှိသည်.
စက် [CNC & VMC]
ကုန်ကြမ်းကိုလိုချင်သောပုံသဏ္ into ာန်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်စက်ယန္တရားအဖြစ်လူသိများသည်. ၎င်းကိုကုန်ကြမ်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှအကြောင်းအရာများကိုထိန်းချုပ်ထားသောဖယ်ရှားရေးဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်.
ဤတွင်စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်စက်ကိရိယာနှစ်မျိုးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် - ကွန်ပျူတာအရေအတွက်အားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော (CNC) နှင့်ဒေါင်လိုက်စက်စင်တာ (VMC).
Shacha Technoforge နောက်ဆုံးပေါ် CNC နှင့် VMC စက်ကိရိယာများကိုအရည်အသွေးမြင့်မားစွာဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး perfectly ုံကောင်းမွန်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအစကတည်းကပြုပြင်မွမ်းမံသည်.
မကြာမီ Shacha Technoforge သည်အပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များသို့လည်းအကျိုးဆက်ပေးလိမ့်မည်. ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအိန္ဒိယ၏ ဦး ဆောင်သောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရာထူးကိုထပ်မံဘိလပ်မြေကိုဘိလပ်မြေကိုထပ်မံအခွင့်အလမ်းများပေးလိမ့်မည်.
မကြာမီ Shacha Technoforge သည်အပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များသို့လည်းအကျိုးဆက်ပေးလိမ့်မည်. ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရာထူးကိုအိန္ဒိယ၏ ဦး ဆောင်သောကုမ္ပဏီအဖြစ်ထပ်မံအခွင့်အလမ်းများပေးလိမ့်မည်။